Tian'i Myanmar ireo mpizahatany Japoney: manatrika JATA Tokyo
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Myanmar » Tian'i Myanmar ireo mpizahatany Japoney: manatrika JATA Tokyo
Miaraka amin'ireo nosy kanto any atsimo, torapasika madio any andrefana ary tendrombohitra mahafinaritra any avaratra, Myanmar dia manana toeran-kafa vaovao mahafinaritra izay mendrika hotsidihina sy manintona miandry azy.
Izany no hafatra entin'ny Myanmar fizahantany fizahan-tany amin'ny hetsika fizahan-tany malaza manerantany, JATA Tourism Expo, izay manomboka anio any Tokyo.
Ny 22 septambra izao dia hikarakara seminera fampiroboroboana Myanmar sy valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany ao Myanmar, izay harahin'ny seminera iray hafa momba ny fotodrafitrasa fizahan-tany Myanmar amin'ny 25 septambra, aorian'ny fifaranan'ny varotra. Manomboka amin'ny 25 ka hatramin'ny 27 septambra izao, ny MTM dia haneho fampirantiana sary an'i Myanmar, izay manasongadina ny lisitr'ireo mpizahatany izay miha mitombo.
Olona maherin'ny 100,000 no antenaina hanatrika ny hetsika mandritra ny efatra andro, izay amboara miaraka amin'ny orinasa sy fikambanana mifandraika amin'ny fizahan-tany maherin'ny 1,100 amin'ny firenena 140 manerana ny faritra.
May Myat Mon Win, filohan'ny Marketing momba ny fizahan-tany ao Myanmar dia nilaza hoe: “Mety nahafantatra an'i Myanmar ho toeran-kolontsaina ianao. Raha ny tena izy dia maro ireo singa manintona mandrafitra ny firenena, ary ny fitsidihana ihany no ahafahan'ny olona misambotra ny tena fanahin'i Myanmar. ”
Ao anatin'ny fampielezan-keviny vaovao, ny fizahan-tany fizahan-tany any Myanmar dia manolotra toera-piasana vaovao ho an'ny tanora amin'ny alàlan'ny fandaharan'asan'ny fizahantany miorina amin'ny fiarahamonina toy ny filentika ao amin'ny Myeik Archipelago, ny dia an-tongotra manodidina an'i Inle, Kalaw ary Pa-O ary koa ny fizahana ireo farihy, tendrombohitra sy zohy ao Hpa-an.
Ho an'ireo vehivavy mpitsangatsangana maniry hahita ny lafiny mahafinaritra an'i Myanmar, ity firenena ity koa dia manome toerana tsara ho an'ny sakafo, fiantsenana ary fahasalamana. Sakafo matsiro toy ny
Ny paty Mote Hin Gar sy Shan dia ohatra vitsivitsy monja amin'ny zavatra ekena ny sakafo Myanmar. Ny mpivarotra dia mankasitraka ny haren'ny safidy amin'ny jade sy vatosoa avo lenta ary lamba landy sy landy.
May Myat Mon Win, filohan'ny Marketing momba ny fizahan-tany ao Myanmar dia nanazava bebe kokoa: "Avy aminay dia manao izay azonay atao izahay mba hahazoana antoka fa manana fotoana mahafinaritra ao Myanmar, mandritra ny taona ny mpitsidika iraisam-pirenena."
Eo am-piandrasana ny fitomboan'ny isan'ny mpizahatany dia nitombo tsy an-kijanona ny famatsiana ny efitranon'ny trano fandraisam-bahiny tao Myanmar. Araka ny voalazan'ny Colliers Property Report Q2 2017, ny tahiry hotely avo indrindra any Yangon dia nitombo hatrany, miaraka amin'ny famatsiana isan-taona ho an'ny taona dia hahatratra avo lenta vaovao ary efitrano vaovao 4,000 ho vita ao anatin'ny telo ka hatramin'ny efa-taona manaraka. .
Boeing sy Airbus dia niahiahy momba ny fiaraha-miombon'antoka Rosia sy ny Shinoa Comac ary fiaramanidina mpandeha 330